Ugu Weyn Ee Petunia
Kambiyuutarada ku koraya guriga
Ku dhowaad dhammaan dadka jecel dhirta indoor-ka waxay ka warqabaan xayawaaniinta aan qabin. Badanaa waxaa laga heli karaa beeraha, jarribooyinka, lagu arko balakooniyada iyo guntimaha. In hawada furan sida caadiga ah ku beeray petunia fudud. Noocyada Terry ee saameyn ku leh dabaysha ama roobka si deg deg ah u lumay oo lumiyo quruxdiisa oo dhan. Kambiyuutarada koraya oo xannaaneynaya waa wax fudud in la sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerarka qaarkood.
Sida loo taro xayawaannada: abuurka, gooynta
Xayawaanku waa cadho, calaamad midab leh oo ah xagaaga xannaanadda leh, taas oo aanad ku qanacsaneyn, mar kasta oo ay maraan sariirta ubaxyada ee ubaxyada. Noocyada noocan oo kale ah iyo sawir midab leh, sida petunia, waxay u hinaashi kartaa ubax sanad walba beerta. Haddii aad go'aansato inaad ku darto midabyo dhalaalaya sariirtaada, fiiro gaar ah u yeelo petunia, sababtoo ah ma adkaan doonto in la koro lana daadiyo miraha ama gooynta.
Petunia siriyaalka: sida loo quudiyo geedka ubax badan
Guga iyo xagaaga, waxaad dooneysaa inaad indhahaaga ku qurxiso wax qurux leh, qurxin deyrkaaga, balakoonka iyo xayawaanka daaqada leh ubaxyada, waxaad ku abuurtaa raaxo iyo ku raaxee quruxda. Waxaa jira tiro badan oo ah noocyada dhirta. Waxaad iyaga ku kori kartaa naftaada ama waxaad ku iibsan kartaa dheriyo. Goobta ugu horeysa ee kala duwan, palette hodanka ah ee midabka iyo quruxda waa petunia.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Petunia 2019